Ukubaluleka kwempilo yeemvakalelo kubantwana | IBezzia
Ukubaluleka kwempilo yeemvakalelo ebantwaneni
UMaria Jose Roldan | 09/07/2021 20:58 | Fundisa abantwana
Bambalwa abazali abaziyo ngokuqinisekileyo ukuba luqulathe ntoni ulwazi lweemvakalelo. Eli nqaku lihamba lingaqwalaselwa kwaphela xa kuthelekiswa nokusebenza kwesikolo kunye namabanga aphezulu ekupheleni kwekhosi.
Nangona kunjalo, impilo yeemvakalelo zomntwana ibaluleke kakhulu njengeziphumo zakhe esikolweni. Abantwana kufuneka bazilungiselele kwasekuqaleni, ukuze ukwazi ukulawula iimvakalelo zakho kwaye uzilawule ngeyona ndlela ibalaseleyo.
1 Ukubaluleka kwemfundo yeemvakalelo ebantwaneni
2 Uyityebisa njani impilo yeemvakalelo zabantwana
Ukubaluleka kwemfundo yeemvakalelo ebantwaneni
Imfundo yeemvakalelo ayifundiswa esikolweni kwaye ifundwe kwiminyaka edlulileyo, kuxhomekeke kubudlelwane abantwana abanabo ngokusingqongileyo. Ukuba nemfundo efanelekileyo nefanelekileyo yemvakalelo ibenza kule minyaka idlulileyo babe ngabantu abanovelwano nabanye ekulula ukunxibelelana nabo.
Ukongeza koku, impilo elungileyo yeemvakalelo ibalulekile xa kuziwa ekomelezeni ukuzithemba nokuzithemba. Abantwana bayakholelwa kwiziqu zabo nakwinto abanokuyiphumeza ebomini.
Uyityebisa njani impilo yeemvakalelo zabantwana
Emva koko siza kukunika uthotho lwezikhokelo okanye iingcebiso Baza kukunceda uqinise kwaye ucebise impilo yeemvakalelo yabantwana bakho:
Kubalulekile ukwakha impilo yeemvakalelo ukusukela ngexesha usana luneeveki ezimbalwa ubudala. Uthando nothando lwabazali ngoyena ndoqo ukuze iqhina lomanyano lube ncinane okanye lomelele kancinci. Isenzo esilula sokumjonga okanye ukumthambisa kuwo wonke umzimba wakhe, kubalulekile ekwakheni ubukrelekrele bakho beemvakalelo.
Kwimpilo yeemvakalelo, ukukwazi ukuzibeka endaweni yomntwana kwaye umphulaphule xa kufanelekile kubaluleke kakhulu. Ingxaki enkulu kwezemfundo namhlanje kukuba abazali abamameli abantwana babo, nto leyo ebangela ukuba impilo yabo yeemvakalelo ibe phantsi. Akukho nto yenzekayo ukubamba abantwana, jonga emehlweni abo kwaye umamele yonke into abayithethayo. Kubalulekile ukuba bazive bebalulekile ngaphakathi kwinqanaba losapho.
Enye into abazali ekufuneka bayithathele ingqalelo xa kufikwa kubukrelekrele bemvakalelo babantwana babo kukuba bayayazi indlela yokuchonga iimvakalelo nganye kwaye bayazi ukuba ziziphi iziphumo ezibangela umntu. Ukusukela ngexesha bebancinci, kufuneka bazi ngalo lonke ixesha ukuba zeziphi iimvakalelo ezisisiseko kuye nawuphina umntu kwaye zeziphi ezona zinzima. Abakwazi ukungahoyi iimvakalelo ezinje ngolonwabo okanye usizi.
Ngaphandle kokwazi iimvakalelo ezahlukeneyo, kubalulekile ukuba bafunde besebancinci ukuba bakwazi ukuzibonakalisa ngaphandle kwengxaki. Kuya kufuneka babe nenkululeko epheleleyo xa kuziwa ekuvakaliseni iimvakalelo ezahlukeneyo kwaye bangazithembi ngayo.. Abazali kufuneka bazihlonele ezi mvakalelo kwaye bangazihlekisi. Ukuba abantwana baziva ngalo mzuzu, kufuneka baxhaswe nokuba ziimvakalelo ezingalunganga okanye ezilungileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Oomama » Fundisa abantwana » Ukubaluleka kwempilo yeemvakalelo ebantwaneni
Kutheni le nto iibunions ziphuma
Fumanisa zonke izitshixo zokujikisa kunye nokujika windows